July 24, 2020 2021-01-25 16:49
အရောင်းသမားတစ်ယောက် ရောင်းအားတက်ဖို့ဆိုရင် စနစ်ကျပြီး မှန်ကန်တဲ့ Sales Plan တစ်ခုလိုတာ ကျိန်းသေပါပဲ။ ထိပ်တန်းအရောင်းသမားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ အရောင်းပိုင်းအတွေ့အကြုံတွေအပြင် စနစ်ကျတဲ့ ဗျူဟာတွေနဲ့ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖို့လိုတယ် မဟုတ်လား?
အရောင်းပိုင်းမှာလည်း ရလဒ်ကောင်းတွေ ဖန်တီးနိုင်မယ်၊ အရောင်းဗျူဟာတွေ Sales plan တွေလည်း စနစ်တကျရေးဆွဲနိုင်မယ်ဆို လုပ်ငန်းတွေက လက်မလွှတ်နိုင်တဲ့ ထိပ်တန်းအရောင်းသမားကောင်း၊ အရောင်းမန်နေဂျာကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာမှာပါ။
မန်နေဂျာတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကိုယ့်လုပ်ရမယ့် လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကို ရှင်းလင်းစွာ သိသွားမယ်။
အရောင်းဗျူဟာချဖို့ ကိုယ့်လုပ်ငန်းရဲ့ ဈေးကွက်သဘောတရားတွေကို ရှင်းလင်းစွာ သိသွားမယ်။
အရောင်းမဟာဗျူဟာတွေ Sales planတွေ မချခင် မဖြစ်မနေလေ့လာသုံးသပ်ရမယ့် အချက်အလက်တွေသိသွားမယ်။
စရိတ်သက်သာပြီး အသုံးဝင်မယ့် အရောင်းပိုင်း ဗျူဟာတွေကို လက်တွေ့ လုပ်ဆောင်နိုင်သွားမယ်။
ကိုယ့်ကုန်ပစ္စည်းအတွက် မှန်ကန်တဲ့ စျေးကွက်နဲ့ စျေးနှုန်းသတ်မှတ်နည်းတွေ၊ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချနည်းတွေသိသွားမယ်။
ကိုယ့်ကုန်ပစ္စည်းအတွက် မှန်ကန်တဲ့ “Promotion” နည်းတွေသိသွားမယ်။
ကိုယ့်လုပ်ငန်းအတွက် အရေးကြီးတဲ့ ဝယ်သူ၊ ဖောက်သည်တွေ သူများဆီမရောက်သွားအောင် ရေရှည် ဆက်ဆံရေး တည်ဆောက်နိုင်သွားမယ်။
အဲလိုမျိုးတွေ သိပြီး၊ လုပ်နိုင်လာပြီး လက်ရှိရောင်းအား ၅၀% လောက်တက်လာမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်အတွက် ဘယ်လောက် အကျိုးအမြတ်ရနိုင်မလဲ။
မှန်ကန်ထိရောက်တဲ့ အရောင်းဗျူဟာများ၊ Sales plan များ ချမှတ်ဖို့အတွက် Better Sales Mastery Series ရဲ့ သင်တန်းတစ်ခု ဖြစ်တဲ့ Better Sales Strategist – Live Online Class သင်တန်းကို တက်ပါ။
သင်တန်းအပ်ရန် မက်ဆေ့ သို့မဟုတ် ဖုန်း ၀၉၄၂၄၆၃၈၃၈၀ ၊ ၀၉၄၂၀၀၆၅၂၆၇ သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
Module 1 : Clarity is King and Marketing Concepts Powerpoint Pdf
Module 1 : Quizz
ဈေးကွက်သဘောတရားနဲ့ ဝယ်သူတွေရဲ့ ဝယ်ယူပုံစံတွေကို ဒီ course မှာ အသေးစိတ်လေ့လာကြည့်ရအောင်
အရောင်းနည်းဗျူဟာတွေ ချမှတ်တဲ့အခါ ဘာတွေ ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်လဲ။ အရေးပါတဲ့ concept တွေကို ဒီ course မှာ ရှင်းပြပေးသွားမှာပါ
Sales Strategy Tempalate
Module3: Sales Strategy : Concept Powerpoint Pdf
Module4: Sales Strategy : Planning Process Powerpoint Pdf
အရောင်းဗျူဟာချမှတ်ပြီးရင် လိုအပ်တဲ့ Pricing Strategy, Promotion Strategy တွေ Distribution အကြောင်းတွေကို ဒီ module မှာလေ့လာရမှာ ဖြစ်ပါတယ်
Module5: Sales Strategy : Sales Program Powerpoint Pdf
Key Account Management နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဘာတွေ လိုအပ်လဲ? ဘာတွေ သိထားရမလဲ? ဘယ်လို Relationship တည်ဆောက်ရမလဲ အသေးစိတ်ပြောပြာပေးသွားမှာပါ
Module6: Key Account Management and Relationship Selling Powerpoint Pdf
Instructor	ဦးမင်းသန်းထွဋ် -
Enrolled	372 students
Language	English - Myanmar